NDỊ KOGI NA-EBE NA GỌVANỌ BELLO ARỤGHỊ IHE ỌBỤLA, GỌỌMENTI ETITI BUNYE YA AKATAMKPO EGO “IJI MEE NHỌPỤTA” – hoo!haa!!
NDỊ KOGI NA-EBE NA GỌVANỌ BELLO ARỤGHỊ IHE ỌBỤLA, GỌỌMENTI ETITI BUNYE YA AKATAMKPO EGO “IJI MEE NHỌPỤTA”
Lokoja – Ogwe dị n’onyonyoo a ndị ntorobịa jiri osisi rụọ bụzi ihe dị n’ụzọ sitere na Idah gaa Ibaji na Kogi Steeti.
Kaosiladi, Gọọmenti Etiti e bunyela Gọọmenti Kogi Steeti akatamkpo ego dị ijeri Naira n’ụma (N10.069bn) iji kwụghachi ego Steeti ahụ mefuru ịrụ ụzọ nakwa ọrụ ndị ọzọ Gọọmenti Etiti kwesịrị ịrụ na steeti ahụ.
Gọvanọ Yahaya Bello, onye nke e bunyere ego a bụ onye ndị Steeti ya na-achọ ihe rụpụtara n’afọ anọ ọ nọworo n’ọkwa.
Kama ihe e jiri mara ya bụ ọchịchị nchigbu nakwa ịwakpo ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ọzọ n’ike. Mmadụ ole na ole etufuola ndụ ha n’ọgbaghara na-adapụta n’etiti ndị nkwado APC na ndị PDP, kemgbe nwoke a batara n’ọkwa.
Ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP etiela mkpu ka ụwa nụ olu ha na “ego a Gọọmenti Etiti bunyere Gọvanọ Bello, ka ọ fọdụrụ abalị atọ iji mee nhọpụta Gọvanọ Steeti ahụ bụ ego iji e bunyere ya ka o jiri mee nhọpụta ụbọchị Satọdee a.
Ndị PDP na-ekwusi ike na Ijeri Naira iri ahụ n’ụma ga-ala na ịzụ ngwa ọgụ nakwa inye ndị mmadụ aka azụ ka ha wee tụnyere Gọvanọ ahụ bụ onye ji aha APC azọ ọkwa Gọvanọ.
Onyeisiala Muhammadu Buhari nọrọ n’abalị iri nke ọnwa Ọktoba afọ a zitere Sineti ozi maka nkwụghachi ụgwọ Gọọmenti Kogi ji rụọ ụzọ nakwa ọrụ ndị ọzọ bụ nke Gọọmenti Etiti na Steeti ahụ.
Ndị Omebeiwu n’anọghị n’ọchịchị jụrụ ịnabata ya bụ ego nkwụghachi ahụ, ha sịrị Gọọmenti Etiti hapụ ego ahụ ka e mechaa nhọpụta Satọdee a.
Kaosiladi, Sineti gara n’ihu tinye aka n’ego nkwụghachi ahụ maka na ndị APC, ndị ka n’ọnụ ọgụgụ kwadoro ya.
Ihe ka njọ bụ na ihere kwere Gọvanọ Bello na ndị otu ya si ogwe osisi ahụ ndị ntorobịa rụrụ were gafee iji bịa achụmnta nkwado na mpaghara ahụ.
Gọọmenti Kogi Steeti nyere ọrụ ngo ụzọ nakwa ogwe Idah/Ibaji mana arụghị ya arụ.
Sọọsọ ihe Gọvanọ Bello mere bụ ike ndị eze ọdịnala na mpaghara ahụ ụgbọala nakwa ego ebe e ji ndị ọrụ ụgwọ ọnwa ogologo oge.
Hmm, nsogbu dịkwa!
Previous Post: MAKA ỊBỤ ONYE ỌCHA :NWATAKỊRỊ NWOKE AGBAALA NNE NA NNA YA AKWỤKWỌ
Next Post: HMM,MAHADUM UNN GA-EME ỌGBAKỌ AMOSU